စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 21/02/2020)
နေ့ 8 တစ်ဘို့သိုထားခြင်းဖြစ်သည် ရှည်လျားသောမီးရထားစီးနင်း နှင့် Rothenburg ob der Tauber များ၏ရောင်စုံမြို့. သင့်အနေဖြင့်စီးနင်းရှည်လျားကြောင်းစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ, သင်ဤပုံမြို့သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အချိန်များများရပါလိမ့်မယ်. ဒါဟာအလွန်သေးငယ်သည်, နှင့်သင်တဦးတည်းနေ့လည်ကတွေ့နိုင်ပါသည်.
Nuremberg Bavaria ၏ပြည်နယ်ဒုတိယအကြီးမားဆုံးမြို့ဖြစ်၏. ဒါဟာအစကသင်၏အပေါ်တစ်ဦးမဖြစ်မနေအလည်အပတ်ခရီးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် 10 Bavaria အတွက်ခရီးစဉ်ရက်ပေါင်း. သို့သျောလညျး, မင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်, သင်အမြဲ Wurzburg ကပြောင်းနိုင်သည်. နှစ်ဦးစလုံးမြို့ကြီးများအတော်လေးနီးစပ်အချင်းချင်းဖြစ်ကြပြီး Rothenburg, ဒီတော့ခရီးသွားတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလွယ်ကူသောဖွစျလိမျ့မညျ.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “တစ်ဦးက 10 နေ့ခရီးစဉ်များတွင် Bavaria ဂျာမဏီ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fitinerary-bavaria-germany%2F ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)